Inona no jerena ao amin'ny tanànan'ny Italiana Siena | Vaovao momba ny dia
Siena, iray amin'ireo tanàna manan-danja indrindra amin'ny tsara tarehy Faritra italiana any Tuscany. Tanàna manan-tantara, manan-karena amin'ny kanto, toy ny tanàna italianina maro, miaraka amin'ny habaka mahafinaritra sy faritra efa antitra misy arabe tery very.
Androany isika dia hitsidika ny Tanàna Siena, any Tuscany. Tanàna iray izay tsy be mpizahatany toa an'i Roma na i Florence, nefa manana zavatra betsaka hatolotra ireo mpitsidika azy. Mazava ho azy, raha hitsidika azy isika rehefa Palio malaza io, dia hahita vahoaka betsaka isika. Ny andro sisa, tanàna mangina sy mandray olona izy io handehanana mankafy ny toerana manan-tantara.
2 Tilikambo Mangia
3 Katedraly Siena na Duomo
4 Basilika an'ny Sto Domingo
5 Tranombakoka Siena
6 Ny Palio an'i Siena
Ny Piazza del Campo dia tsy isalasalana fa toerana manan-danja indrindra ao an-tanànan'i Siena. Ny toerana voalohany tianay hojerena amin'ny fahatongavanay sy ny tranonkala ankalazana ny Palio malaza, izay misy ny fandrakofan'ny media manerantany. Ao no ahitantsika ny lapan'ny besinimaro, izay misy ny Museum Civic ankehitriny. Ity kianja medieval ity dia iray amin'ireo tsara tarehy indrindra any Italia satria izy no nitahiry ny hatsarany taloha rehetra. Kianja mpandeha an-tongotra tanteraka izy io, ka afaka mandeha mamakivaky azy io mangina isika. Zoro iray hafa hakana sary dia ny Gaia Fountain tamin'ny taonjato faha XNUMX. Saingy tsy isalasalana fa, ny zavatra tsara indrindra tokony hatao amin'ity kianja ity dia ny mihinana na misotro any amin'ireo trano fisakafoanana sy fisotroana misy terraces. Iray amin'ireo teboka fanaovana asa sosialy eto an-tanàna.
Ny Torre del Mangia no lakolosy an'ny lapam-panjakana, natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ny anarany dia nadika ho tilikambon'ilay mihinana sy mahazo ny karama lehibe nananan'ny mpikarakara azy, izay tena mora nihinan-kanina sy fako. Azo atao ny miakatra amin'ity tanàna ity ary manana fomba maro hafa momba ny tanàna avy ao.
Katedraly Siena na Duomo
Ny katedraly Duomo dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra any Italia. Izy io dia tranobe misarika ny saina betsaka amin'ny antsipiriany rehetra momba azy Tarehy tamin'ny taonjato faha-XNUMX amin'ny fomba italiana gothic. Ny fazade dia misy andohalambo telo sy varavarankely raozy, mozika volamena ary sary sokitra. Ilaina ny manana fotoana tsara handinihana ireo pitsopitsony kely rehetra momba io facade Gothic tsara io. Ny Campanile Tower sy ireo batisany tsara tarehy dia toerana tsy tokony hihoarina ihany koa. Ao anatiny dia misy sangan'asa kanton'ny haavo Donatello, Michelangelo na Bernini. Ny tsy maintsy jerena ihany koa dia ny Panorama del Duomo, ny fomba fijeriny izay manome fahitana malalaky ny tanànan'i Siena. Raha mitsidika ny Duomo isika amin'ny volana septambra dia mety ho tsara vintana isika mahita ny gorodony tany am-boalohany, izay tazonina hitahiry azy, satria manana kianja marbra feno sary. Ny Katedraly Crypt, sendra hita tamin'ny taona 1999, dia tokony ho tsidihina ihany koa, satria misy freskozy taonjato faha-XNUMX, satria nikatona sy nakatona tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Basilika an'ny Sto Domingo
Ity Basilika ao San Domenico na Santo Domingo ity dia iray amin'ny trano fivavahana lehibe indrindra avy ao amin'ny tanànan'i Siena. Izy io dia natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX, na dia nahazo ny fomba Gothic izay ananany ankehitriny aza izy io. Birika no fananganana azy, noho izany ny tonony. Ho fanampin'izany, amin'ity basilika ity dia afaka ahitantsika ny sisan'ny Lehiben'ny Saint Catherine, izay mpiaro an'i Italia. Hitanay ihany koa ny fresco namboarina tao Saint Catherine fony fahavelony. Ao anatiny koa isika dia hahita trano fiangonana sy alitara marobe, miaraka amin'ny sanganasa kanto sasany. Raha te-hahita azy amin'ny hatsarany rehetra avy any ivelany isika dia afaka manao azy amin'ny fomba fijerin'ny Duomo an'i Siena.
Eo alohan'ny Katedraly Siena no misy ny Tranombakok'i Santa María della Scala. Ity no iray amin'ireo hopitaly voalohany nanatrika fivahinianana masina teto amin'izao tontolo izao, saingy manana an'ity foibe ity isika ho an'ny Centre for Contemporary Art, ny National Archaeological Museum ary ny Museum of Art for Children. Misy ny soritry ny Etruscan, Roman na Moyen Age. Ny Museo dell'Opera Metropolitana no zava-dehibe indrindra ao Siena, ary akaikin'ny katedraly koa izy io. Ahitana sary sokitra sy sarivongana.
Ny Palio an'i Siena
Raha te hahita an'i Siena amin'ny famirapiratany rehetra ianao dia tsy maintsy mankany malaza Palio an'i Siena. Hazakazaka soavaly izay miatrika ny distrika samihafa ao an-tanàna ary atao indroa isan-taona. Ny 2 Jolay dia ny Palio di Provenzano ary ny 16 Aogositra ny Palio dell'Assunta. Izy io dia manana fiaviana ara-tantara ary hazakazaka iray izay omen'ny fiarahamonina Siena famatsiam-bola, ary tsy manaiky dokambarotra, araka ny hitantsika raha mandeha amin'ity fampisehoana ity isika. Atao ao afovoan'i Piazza del Campo izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Inona no jerena ao amin'ny tanànan'ny Siena any Italia
Fahavaratra any Paris, ny dobo tsara indrindra hangatsiatsiaka